Windows မှ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှု ၁၀၀ ကျော်ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ Linux မှ
တီနာတိုလီဒို | | applications များ, ဖြန့်ဝေ, အကြံပြုပါသည်
Linux ကိုရယူပါ ၎င်းသည် distro ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် Linux ကို ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ preference ကို၏ Windows ကို.
၎င်းတွင်သင့်အားရရှိနိုင်သည့် distros များအကြားသွားလာရန်ခွင့်ပြုပေးသည့် previewer တစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ဖော်ပြချက်နှင့်ဖမ်းယူထားသောနည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်တစ်ခုရှိသည်။ pantalla အဘို့, အခြားအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များအပြင် အသုံးပြုသူ သင် 32 သို့မဟုတ် 64 bit ဗားရှင်းကိုလိုချင်လျှင်ရွေးချယ်ပြီးစတင်ပါ ကုန်ချ ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စီမံခန့်ခွဲသူတစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည် Descarga ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေစဉ်ပြhappensနာဖြစ်လျှင်၊ နောက်မှပြန်စတင်နိုင်သည်။
သင်သည်လျှောက်လွှာကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် download လုပ်နိုင်သည် Linux ကိုရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Windows မှ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှု ၁၀၀ ကျော်ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ
wow ဘာကောင်းတစ် ဦး ပြပွဲ။ အရမ်းဆိုးတာက windows တွေအတွက်ပဲ။
ငါမြင်တာကကျားသစ် XD ရဲ့အရေပြားပါတဲ့ windows7လား။
အကယ်၍ တစ်ခု Windows ကို7ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စားပွဲခုံများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုသူဘဝမှ စ၍ icon များနှင့်ဆင်တူသည် မက်။ ဒါကငါကြည့်ပုံပါ Linux Mint Elisa: http://i232.photobucket.com/albums/ee1/daytrippergirl/Pantallazodel2012-01-05204145.png
ငါလည်း Mac OS စတိုင်ကိုကြိုက်တယ်
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် windows7၏ပုံမှန်အသွင်အပြင်ကိုပိုနှစ်သက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် kde XD အသုံးပြုသူအရောင်အရသာအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ Tina Mint Elisa အတွက်ဘယ်သင်္ကေတများကိုသင်သုံးပါသလဲ။
Kde ပါတဲ့ OpenSuse desktop ဆိုတာငါအနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုပါ။
ငါ gekko ကိုချစ်တယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက ၀ င်းဒိုး application မဟုတ်ဘဲဝဗ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုမဟုတ်လား။ ဒါဟာအများကြီးပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်စေလိမ့်မယ်။
အို_O ... +1
Jorge Loyola ဟုသူကပြောသည်
ဒီအမျိုးအစား၏ဘလော့ဂ်အတွက် ၀ င်းဒိုးပါသည့် ၀ င်းဒိုးပါသောစက်ပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်တစ်ခု၏ဖန်သားပြင်မျက်နှာပြင်များထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူး
Jorge Loyola ကိုပြန်ကြားပါ
ထိုဖန်သားပြင်အရ၎င်းတို့အား Debian version Linux Mint မပါ ၀ င်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ်ထူးဆန်းနေပုံရသည်၊ မကြာသေးမီကလူကြိုက်များမှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
လူသည် beta တွင်ရှိနေသည်၊
Nope ... ငါမစမ်းကြည့်ဘူး ဝိုင်, screenshots တွေငါ့စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီ Linux ကိုရယူပါ မှ Windows ကို 7.
ပရိုဂရမ်အတွက်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည့်အသုံးအနှုန်းမှာ၎င်းကို USB ပေါ်တွင် တင်၍ ၎င်းပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည် Windows ကို မိတ်ဆွေတစ် ဦး မှကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ရွေးချယ်ရန် distros catalog ကိုပြချင်ပါက။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောအချက်အလက်အနေဖြင့် Gimp ၏သင်ကြားပို့ချမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်
ဒေးဗစ် DR ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် ။ ငါဒါကိုစမ်းသပ်မယ်။
David DR သို့ပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းသည်ဤ !! ... စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခု၊ get-linux ဆိုဒ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနေသလား၊ သို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည် ၀ င်ရောက်လာချိန်တွင်သက်တမ်းကုန်သွားပြီလား။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသိလျှင်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုထပ်မံတင်မည်လား။
Conk ကို Gnome3တွင်စတင်ပါ